साँघुटार बजारको आगलागी नियन्त्रणमा, ४ घर जले « Harekpal
साँघुटार बजारको आगलागी नियन्त्रणमा, ४ घर जले
वद्री नयाँघरे ।
रामेछाप, ९ साउन । रामेछाप नगरपालिका वडा नं. ३ साँघुटारमा भएको आगलागी नियन्त्रणमा आएको छ । स्थानीय गाउँले बजारवासी र प्रहरीको लामो प्रयासपछि सो आगलागी दिउँसोवाट नियन्त्रमा आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बिहिबार विहान स्थानीय राजन सुवेदीको घरवाट लागेको आगोले अरु ४ ओटा घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ । राजन सुवेदीको घरको विजुली सर्ट भई घर वाट आगो निस्किएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको गरिएपनि वडा. नं. ३ का वडा अध्यक्ष भुपाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार सुवेदीको प्रीफ्यबको घरमा विद्युतको लाइन सट भएको र उक्त घरमा डिजेल राखिएकाले अन्य घरमा समेत आगो फैलिएको हो ।
बिहान साँढे ८ बजे देखि आगो लागेको र नदिी किनारको वस्ती भए पनि सवैको लामो प्रयास पछि दिउँसो १ वजे मात्र आगो नियन्त्रणमा आएको रामेछापका प्रहरी प्रमुख सन्तोष भट्रार्इंले जानकारी दिए । आगो पुर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको भए पनि क्षतिको पुर्ण विवरण भने आईनसकेको उनले वताए ।
आगलागिको खवर पाउना साथ प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिला पाण्डेको नेतृत्वमा प्रहरी प्रमुख रेडक्रस रामेछाप नगरपालीका र संचारकर्मिहरूको टोली साँघुटार पुगेको थियो । जिल्लावाट गएको टोलीले पीडित परिवारलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा नगद त्रिपाल लगाएतको राहत सामग्री वितरण गरी सदरमुकाम फर्किएको छ । क्षतिको विवरण संकलन र टिपोट गरि पूर्ण विवरण जिल्लामा पठाउन पनि प्रजिअले निर्देशन दिएका छन् ।
आगो नियन्त्रणको लागि साँघुटार प्रहरी, वजारवासी र स्थानीय गाउँलेहरूले लगातार सहयोग गरेकै कारण वजारको वाँकि घरहरू र मानविय क्षति समेत हुन नपाएको वडाअध्यक्ष भुपाल श्रेष्ठले जनकारी दिए । उनले भने वडा कार्यालयको अगुवाइमा घटनाको वास्तविक तथ्य र क्षतिको विवरण तयार पारी त्यसको विवरण सार्वजनिक गरिने छ । उनले उद्दार कार्यमा सहयोग गर्ने सवैलाई वडाअध्यक्षको तर्फबाट धन्यवाद समेत दिए ।